विवादित वामदेवकाे राष्ट्रियसभा आरोहण - DURBAR TIMES
HomeOpinionविवादित वामदेवकाे राष्ट्रियसभा आरोहण
राजनिति सत्ताकाे वरिपरि मात्र पावरफुल हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली नेताहरूले राम्राेसँग बुझेका छन् । सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै आफ्नै भन्नेहरूले पनि नगन्ने पीडा प्राय सबै नेताहरूले भाेग्दै आएका छन् । र यीमध्ये सबैभन्दा अनुभवी नेता हुन् वामदेव गाैतम ।
वामदेव गाैतम नेपाली राजनितिमा प्रभावशाली नेताका रूपमा आफ्नाे छवि बनाएका नेता हुन् ।वि.सं. २००५ साल असार २८ गते प्युठानकाे दाखाक्वाडी १ मा माता पद्मादेवी गाैतम र पिता कविराम उपाध्यायका काेखबाट जन्मिएका वामदेव गाैतमले वि.सं. २०२२ सालदेखि नै नेपाली राजनितिमा पाइला राखेका थिए ।
नेपाली राजनैतिक इतिहासकै सबैभन्दा विवादित व्यक्तिका रूपमा समेत चिनिएका व्यक्ति हुन् वामदेव गाैतम । सत्तामा रहँदा हाेस या सत्ताबाहिर हुँदा हाेस उनी सँधै चर्चामै रहन मन पराउने गर्दछन् । हालैमात्र नेकपामा आएकाे विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी बाटाे औँल्याएका वामदेव गाैतम निर्वाचनमा हार व्यहाेरेर पनि राष्ट्रिय सभाकाे रिक्त पदमा मनाेनयन भएका छन् । राष्ट्रिय सभाकाे याे पद वामदेव गाैतमका लागि वरदान सावित भएकाे छ । हुन त याे पद पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका लागि पनि वरदान सावित भएकाे थियाे ।
२०५४ सालमा पार्टी फुटाउँदा देखि नै उनी विवादित बन्दै आएका छन् । कडा बाेली र बाैद्दिक क्षमता भएकै कारण उनी अरूभन्दा पृथक देखिन्छन् तर सर्वमान्य नेताकाे रूपमा भने उनि कहिल्यै अगाडि आउन सकेनन् । पछिल्लाे समय सत्तामा जानकै लागि उनले गरेका दाैडधुपहरूले पनि उनकाे छवि थप धुमिलिन थालेकाे छ । भलै उनि आफ्नाे स्वार्थ पुरा गर्न सफल भए । उनि राष्ट्रिय सभामा पुग्न सफल भए तरपनि जनतामाझमा भने लाेकप्रिय पात्र बन्न नसकेकाे देखिन्छ।
कडा स्वभाव तर विवादित छविका कारण सँधै चर्चामा रहने वामदेव गाैतमका केही विवादित कार्य र समयहरूबारे केही चर्चा गराैँ ।
२०५४ सालमा नेकपा एमाले पार्टी फुटाएर नेकपा माले पुनर्गठन गरेदेिख नै उनी कार्यकर्ताहरूकाे आँखाकाे ताराे बनेका थिए । उनले पार्टी नफुटाएकाे भए २०५६ सालकाे चुनावमा तत्कालीन एमालेले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँथ्याे भन्ने कतिपयकाे तर्क आजसम्म पनि सुन्न पाइन्छ ।
२०७० सालकाे संविधानसभा चुनावमा बर्दिया र प्युठानमा उम्मेदवारी दिएर पैसाकाे खाेला बगाएर चुनाव जिते।पछि एक ठाउँ छाड्नुपर्दा बर्दिया राेजे र प्युठान छाडे । त्यसपछि प्युठानीहरूकाे नजरमा उनी धाेकेबाज नेताकाे रूपमा रहे। आजपनि प्युठानीहरू उनलाई धाेकेबाजकै रूपमा हेर्छन्
२०७४ सालकाे संविधानसभा चुनावमा एमाले र माओवादीकाे संयुक्त प्यानलले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतले चुनाव जित्याे तर याे पटक भने वामदेव गाैतमले चुनाव हारे । चुनाव हारेपछि छटपटिएका उनी नेकपा नेता तथा सांसद रामबिर मानन्धरलाइ राजिनामा दिन लगाएर संसदमा जाने प्रयास गरे । त्याे असफल भएपछि डाेल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाइ राजिनामा दिन लगाए । याे प्रयास पनि सफल हुन सकेन यहाँपनि वामदेव विवादमा मात्र आए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरि संविधान संशाेधन गर्न लागेकाे बेलामा पनि वामदेव गाैतम विवादित बने ।
पार्टि अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव लिएर केपि ओलीले गरेकाे प्रस्तावमा पनि वामदेव गाैतम विवादमा तानिए।
२०५१ सालमा गृहमन्त्री भएका बेला अच्युतकृष्ण खरेललाई आइजिपि बन्न २० लाख घुस मागेकाे काण्डमा पनि वामदेव विवादमा तानिएका थिए ।
फुटपाथ व्यापारीहरूलाइ निशाना बनाएर उनीहरूकाे व्यापार धारासायी बनाउने मुख्य रणनितिकार वामदेव गाैतम नै हुन ।
उनी नेकपा काे अखिल नेपाल किसान महासंघकाे अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन तर पनि सरकारमा जाँदा भने उनकाे राेजाइ जहिले पनि गृह र अर्थमा मात्र पर्छ यसबाट पनि उनि सत्ता र शक्तिमात्र रूचाउने नेता हुन् भनेर पहिल्याउन सकिन्छ ।
मुख्यतया निजी रूपमा शक्ति आर्जनकाे महत्वकांक्षा र एकपटक भएपनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँ भन्ने घिडघिडाेपनले वाैद्दिक छविका वामदेव पटक पटक विवादमा आइरहन्छन् ।
उनका यस्तै यस्तै विवादास्पद कुराहरूले गर्दा पहिलेदेखि नै उनका पक्षमा रहेका नेताहरूले पनि कित्ता परिवर्तन गरिसकेका छन् । याेगेश भट्टराई,घनश्याम भुसाल,रामवीर मानन्धर , स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीहरूले वामदेवकाे किचलाेपन सहन सकेनन् र उनकाे पक्ष नै छाडेर अघि बढे । अहिले विस्तारै वामदेव पार्टीभित्र एक्लाे बन्दै गैरहेका छन् । तरपनि उनकाे बानी भने उस्तै नै छ ।
उनी पछिल्लाे समय सामाजिक सञ्जालमा ट्राेलकाे सिकारसमेत बन्ने गरेका छन् । डिभाइडर नाघेर बाटाे क्रस गरेकाे बेला हाेस या प्रधानमन्त्री बन्न पाए १० वर्षमा चीनलाइ पछि पार्छु भन्ने अभिव्यक्तिमा हाेस उनि सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताकाे निशानामा परिरहे । अहिले राष्ट्रिय सभामा मनाेनयन भएपछि पनि उनी ट्राेलकाे सिकार भैरहेका छन्।
वामदेव गाैतमले नेपाली उखान ‘हार खानु तर हरेश नखानु’ भन्ने उखानलाइ चरितार्थ गर्दै राष्ट्रिय सभामा पाइला राखेरै छाडे । उनले यसकाे लागि जस्ताेसुकै परिस्थितिलाइ पनि आफू अनुकुल बनाउँदै लगे पार्टीलाइ आफ्नाे पक्षमा निर्णय गर्न बाध्य बनाएरै छाडे ।
वामदेव गाैतम नेकपामा एकमात्र यस्ताे नेताकाे रूपमा रहेका छन् जाे जता ढल्कियाे नेकपाकाे माहाेल नै त्यतै भारि हुने गर्दछ । उनले यही शस्त्रकाे प्रयाेग गर्दै राष्ट्रिय सभामा आफ्नाे सीट सुरक्षित गर्न सफल भए । उनले केपी ओली हुन या माधव नेपाल या प्रचण्ड सबैलाई साइजमा राख्न सफल भएका छन् । यसैकाे परिणाम हाे जनमत नहुँदा पनि पार्टी निर्णय आफ्नाे पक्षमा पार्न सफल हुनु। नेकपामा विवादकाे माैका पारेर उनले माैका छाेपेकै हुन र उनी यसमा सफल पनि भए ।
निजी स्वार्थ र मनमाैजि व्यवहारमा रमाएकाे विगत लिएर सत्तामा उक्लिएका वामदेवकाे आकांक्षा यहाँसम्म मात्र पक्कै हैन । यहाँबाट माथि जानका लागि अझै उनले के कस्ताे उपायहरू अवलम्वन गर्छन त्याे भने हेर्नै पर्ने हुन्छ।
जे जस्ताे भएपनि उनि यहाँसम्म आइपुगेका छन् उनलाइ बधाइ दिनैपर्छ । उमेरले पनि नेटाे काटिसकेकाे अवस्थामा देश जनताकाे हितमा केही काम गर्न सके युगले पनि केही सम्मान गर्ने नै छ । उनले बाेलेका कुराहरू पुरा गर्ने अन्तिम माैका बन्न सक्छ त्यसैले आफ्नाे पदीय मर्यादा कायम राखेर देशलाइ उँभाे लगाउने कार्य गरून भन्ने नै हाे । जनताले उनीबाट चाहेकाे पनि यत्ति नै हाे ।
जनताकाे आशा र भराेशालाइ जीवन्त राख्न सकुन हाम्राे पनि उनलाइ यही शुभकामना छ ।
Previous articleजाजरकोटमा गिद्ध गणना
Next articleकक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनको विकल्प खोजिँदै